Gurụ ụka megide akụkọ ihe mere eme na ịbanye mbata | Martech Zone
Mụ na enyi m na-akparịta ụka na-atọ ụtọ, Chad Myers nke Ahịa Ahịa 3, na-ekwu maka otu akụnụba ọrụ ugbo anyị na Ọchịchị Ntanetị sirila duga n'omume ọrụ nke oge a. Dị nnọọ ka kọmputa anyị QWERTY kiiboodu (ezubere ha ka ha ghara ịrụ ọrụ nke ọma ka igodo typewriter agaghị arapara, mana anyị na-eji ha taa na ngwaọrụ ndị na-agaghị ada ada), anyị na-eche echiche na ọ bụ site na 100 ruo 1,000 afọ (na ndị ọzọ) iji chọpụta anyị staffing na-arụ ọrụ mkpebi. Ha adighikwa nma.
Otu Ego oru ugbo si emetụta oru oru anyi
Mgbe ị na-elele ụmụaka Boomers na njikọ ezinụlọ ha na ọrụ ugbo, 1 n'ime 4 ndị America nwere njikọ ụfọdụ na ugbo, na-abụkarị ugbo ezinụlọ. N'oge ahụ, na ọbụna taa, ị na-ebili mgbe anyanwụ dara, rụọ ọrụ maka ọdịda anyanwụ. I nweghi ike ịrụ ọrụ n’abalị, n’ihi na ọkụ anaghị akọ ubi ndị ahụ, traktọ enweghịkwa ọkụ ihu. Rụrụ ọrụ ụbọchị, n'ihi na ndị nna ha rụrụ ọrụ ụbọchị ahụ, dịka ndị nna ha, na ndị nna nna ha tupu ha abịa. Ihu ọma, kemgbe anyị nwere ugbo n’uwa a, ị rụrụ ọrụ n’ehihie ma hie ụra n’abalị.
N'oge a, anyị ekwesịghị ime nke ahụ. Anyị nwere ọkụ eletrik, anyị nwere ike ịrụ ọrụ n'ofe oge, ma jiri Internet ọsọ ọsọ na-ekwurịta okwu ozugbo.
Kedu ka mgbanwe mgbanwe ọrụ si emetụta usoro ọrụ anyị
Ọsọ ọsọsọ na ngwụsị 1800s na mbido 1900s, mgbe ụlọ nrụpụta bidoro na akpaaka mere ka ndị mmadụ si n’ugbo gaa obodo ịchọ ọrụ. Ugbu a, ọ bụrụ na ihe ọ bụla chọrọ iwu ya, emere ya na ụlọ ọrụ mmepụta ihe. Ebe ọ bụ na ndị mmadụ si n’ugbo ahụ pụta, ha ga-arụrụrịrị ọrụ n ’etiti asatọ ruo ise ọzọ.
Ma ugbu a, ebe ọ bụ na ụlọ ọrụ mmepụta ihe dị otu ebe, a ga-arụrịrị ọrụ ahụ na saịtị ahụ. Ngwaọrụ gị dị. Ngwaahịa gị dị. Were bụ akụkụ nke usoro ahụ, ma ọ bụrụ na ịnọghị, usoro ahụ dara. Ọ dị oke mkpa na ị gosipụtara.
N'oge a, a ka na-atụ anya ka anyị pụta. A na-arụ ọrụ anyị n'ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ. Anyị kwesịrị izute ndị mmadụ ihu na ihu. Anyị kwesịrị ịnọdụ ala na obere obere cubicle anyị, ma na-echekwa ọrụ anyị. Part bụ akụkụ nke sistemụ, mana na nke a bụ ihe ndị oru na-aghọtabeghị sistemụ ahụ agaghị ada ada naanị n'ihi na ịnọghị n'ụlọ ahụ.
Otu n’ime ihe kpatara ya bụ na ndị ụlọ ọrụ ahụ atụkwasịghị ya obi. Ọ bụrụ na ha enweghị ike ile anyị anya, ha amaghị ma anyị na-arụ ọrụ. Ha kwenyere na anyị nwere ike iwepụtakwu oge iji kporie ndụ kama ịrụ ọrụ. Echefula na ha nwere ike ịgwa nke ọ bụla, mgbe ndị mmadụ na-ezuteghị oge na arụpụta ihe na-elu ma ọ bụ ala, ọbụlagodi mgbe ndị mmadụ nọ na ogige ahụ. Mana maka ihe ụfọdụ, ndị njikwa na-eche na ndị mmadụ kwesịrị ịnọ oge niile, ma ọ bụ na ọ nweghị ihe ga-eme.
Nsogbu nke Narị Afọ nke 21 nke Iche echiche nke 19th Century kpatara
Imirikiti ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ gọọmentị ka na-eche echiche na narị afọ nke 19 mgbe a bịara na oge ọrụ a na-anabata. Gị ga ịnọ n'ọfịs site na elekere asatọ nke ụtụtụ ruo elekere ise nke mgbede. A gaghị ekwe ka ị rụọ ọrụ n'ụlọ, anaghịkwa ekwe ka ị rụọ ọrụ site na 8: 00 - 5: 00, ma ọ bụ Chukwu ekwekwa! 10:00 - 7:00.
A afọ ole na ole gara aga, mgbe m na-arụ ọrụ maka Ngalaba Ahụike Indiana State, Enwere m ọrụ maka atụmatụ mberede anyị ga-eji ma ọ bụrụ na ọrịa pan na-ada United States. Otú ọ dị, ọtụtụ n'ime ya metụtara ndị mmadụ na-enwe ike ịrụ ọrụ site n'ụlọ. Onye ọ bụla hụrụ atụmatụ ahụ n'anya wee kwuo na ọ bụ ihe anyị chọrọ.
Agwara m ya, sị, “Onye ukwu. “Anyị kwesịrị itinye ya n'ọrụ ugboro ole na ole, ma gbaa mbọ hụ na onye ọ bụla nwere ike iji ya. Nke ahụ ga-eme ka ndị ọrụ dị mkpa rụọ ọrụ na kinks ahụ, gbaa mbọ hụ na ha nwere ike ịnweta ọnlaịnụ, na teknụzụ anyị niile na-arụ ọrụ. N'ụzọ ahụ, mgbe anyị tinyere ya n'ọrụ, anyị niile anaghị akpọ oku ngalaba IT n'ụbọchị nke mbụ. ”
“Ee e, anyị achọghị ime nke ahụ,” bụ nzaghachi. “Anyị chọrọ ka mmadụ niile rụọ ọrụ ebe a. Anyị anaghị arụ ọrụ igwe. ”
Nke ahụ bụ ya. Ọgwụgwụ nke mkparịta ụka. Anyị anaghị arụ ọrụ igwe. Ndị kasị ibu ngalaba na steeti ọchịchị, Ngalaba na-elekọta nke ala si pan flu omume, na anyị emeghị “rie nkita nke anyi. ” Yabụ, enweghị ule, si otú a nwere ike ibibi nzaghachi nke ụlọ ọrụ niile mgbe oge ruru.
* rie ude *
Ngwọta nke Narị Afọ nke 21
Enweghi m ike iche ụdị echiche a. Dịka onye nwe azụmaahịa, enwebeghị m ọrụ oge niile maka ihe karịrị otu afọ. Ana m abịakarị n’ọfịs n’abalị, n’ihi na m na-ehi ụra n’abalị, ọ na-abụkarị n’ihe dị ka elekere 2:00.
Ma obi m ka na-ama m ikpe mgbe oti mkpu dara n'elekere asatọ nke ụtụtụ, ma chee sị, "Ekwesịrị m ịnọ n'ọfịs," ọbụlagodi mgbe ahụ m na-eyi egwu ịmanye m ịmị ụra.
N'agbanyeghị nke ahụ, ana m arụzu ọtụtụ ọrụ m n'anyasị na n'abalị. Ana m akwọ ma na-aga n'ọfịs n'oge awa na-enweghị oke, nke pụtara na m na-eji obere gas. Ana m eji oge m na-azụ ahịa site na ụlọ ahịa kọfị ma ọ bụ obere kọfị. Ego ole ka anyị nwere ike ịchekwa kwa afọ ma ọ bụrụ na ndị ọrụ nwere ike ịhazigharị oge ha nọ n'ọfịs iji kwekọọ na usoro ọrụ ha kacha mma?
Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ nwere ike ịpụ na ụdị echiche a “anyị enweghị ike ịtụkwasị gị obi,” wee chọta ụzọ ọhụrụ iji nye ndị ọrụ ohere ịrụ ọrụ site na ụlọ, anyị nwere ike belata oriri mmanụ anyị. Anyị nwere ike belata ụgwọ ọrụ, yana ala na ịgbazinye ụlọ, ma ọ bụrụ na anyị nwere akara ukwu ụlọ ọrụ pere mpe. Cheedị echiche iji otu ụlọ n'ụzọ iri nke mbụ, nke jupụtara na ihe ọ bụla ma e wezụga ụlọ nzukọ, ime ụlọ nzukọ, na ụfọdụ akụkụ ụfọdụ maka ndị kwesịrị itinye oge n'ọfịs tupu nzukọ ma ọ bụ mgbe nzukọ gachara.
Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ gọọmentị nwere ike isonye na 21st narị afọ, anyị nwere ike ịme ụfọdụ ihe ịtụnanya. Ruo oge ahụ, anyị ga-atụgharị wren anyị anyị na usoro mgbakọ ahụ, wee kpọkọta ịnyịnya ma kọọ ubi.
Tags: na -agaentrepreneuroge ọrụoge ọrụna-arụ ọrụ site n'ụlọ
Erik bụ VP nke Ọrụ & Ọrụ Okike maka Ọrụ Blog Ọrụ. Ọ na-ede blọgụ ihe karịrị afọ itoolu (ọbụlagodi tupu akpọ ya blọgụ), ọ bụrụla onye edemede bipụtara karịa afọ 20. Ọ bụ onye ode akwụkwọ akụkọ ọchị, ma dee ọtụtụ akụkọ azụmaahịa, egwu egwuregwu, ihe nkiri ihe nkiri redio, ma na-arụ ọrụ ugbu a na akwụkwọ akụkọ. O nyeere aka dee Twitter Marketing for Dummies, ma na-ekwukarị okwu banyere ịde blọgụ na mgbasa ozi.
Ike nke ALT na TAB
Lee ka m si zụlite Hullabaloo! aka Cheated ated
Egwu dị egwu, Erik. Aga m agbakwunye na ekwenyere m na ọtụtụ n'ime nsogbu a sitere na enweghị nghọta nke mba a banyere "Gịnị bụ onye ndu". Imirikiti ndị ndu na-enweghị uche m zutere kwenyere na ọ bụ ọrụ ha 'idozi' ndị mmadụ na usoro. N'ihi ya, ha na-elekwasị anya na ihe adịghị mma negative omume na-adịghị mma nke ndị ọrụ ha, nsogbu na-adịghị mma na ngwaahịa na ọrụ ha, nsogbu na-adịghị mma na azụmaahịa ha.
A ga-enwerịrị ihe ‘ga - edozi’ mmadụ niile na azụmaahịa ọ bụla. Nke ahụ abụghị ọrụ nke onye ndu. Onye ndu ahụ kwesịrị ịchọpụta etu esi ekpughere ndị ọrụ ha ọrụ, etu ha ga-esi mee ike ha na ngwa ahịa ha, yana etu ha ga-esi erigbu ihe ịtụnanya azụmahịa ha na-eme.
O di nwute, anyi na akwalite ndi mmadu rue ogo ha. Anyị anaghị enye ndị njikwa anyị ma ọ bụ ndị nlekọta anyị ọzụzụ ọ bụla maka etu esi ejikwa ndị mmadụ nke ọma. Ọ dị oke njọ!
Odi ka i choro iru oru n’ime 🙂